Raw Estriol powder (50-27-1) hplc = 98% | MASHOKO EHORMONI DZEMHURI
/ Products / Madzimai eHormoni / Estriol upfu
Rating: SKU: 50-27-1. Categories: Estradiol powder Series, Madzimai eHormoni
MUTSVENE unobatanidzwa uye unokwanisa kugadzira kubva pa gramu kusvika kuhuwandu hweEstriol powder (50-27-1), pasi peCGMP mutemo uye trackable quality control system.
Estriol powder iyo yakasikwa steroid estrogen, inongoitika chete panguva yekuzvitakura, inogadzirwa muchiropa chechibereko uye adrenal androgen steroid imwe yeatatu makuru esrogen ovarian estriol mune vasina-vakadzi vakadzi zvinenge zvisingaonekwe. Ikozvino inowanzo shandiswa sediki rechikadzi bonde mahormone.
Molecular Kurema: 288.38100
Raw Estriol powder kushandiswa mu steroid cycle
Estriol (CAS 50-27-1) inogurwa inonzi E3, ine zita rechigutu seOvestin.
kusanganisira muromo uye mumadzimai ekutengeserana. Mumusika, kazhinji kazhinji kunotsanangurwa kwe15mg / cream.
Iwe haubvumirwi kushandisa Estriol Kana uri weergergic kana kuti une zviratidzo zvinotevera:
kubuda ropa kweropa;
asina kutongwa endometrial hyperplasia;
anozivikanwa, achishushikana kana kenza yepabonde yapfuura;
inozivikanwa kana inofungidzirwa kuti isrogen-inobva kune zviremara zvinouraya (zvakadai sekenza yemapendometrial);
yapfuura kana kuti ikozvino vhutu thromboembolism (deep vein thrombosis, pulmonary embolism);
kushingaira kana munguva pfupi yapfuura arterial thromboembolism (eg angina, myocardial infarction);
acute chiropa chirwere, kana chiropa chinoshanda chekugadzirisa hachikwanisi kudzorerwa kune yakasarudzika;
Zvidzidzo zvinoratidza kuti apo pasi-potency estrogen, estriol, inotungamirirwa pamusoro pepamusoro, haina kuwedzera kungozi yekenza-inotarisana nekenza yemazamu kana kuti endometrium (uterine lining) .1-3 Zvisinei, kushaya simba kweesrogenic hazvirevi kuti isriol haina chimwe chezvikomborero zvinouya neine estrogens yakawanda. Zvidzidzo zvinoratidza kuti isriol inoderedza zviratidzo zvekuenda kumwedzi, zvakadai sekupisa kunopisa uye kuoma kwemadzimai, asi nehuwandu hwekuchengeteka hunoenzaniswa neestrogen dzakawanda. Izvi zvinogadzira esriol chisarudzo chakanaka chemaoidentical hormone-replacement treatment regimes.
Nzira yekutenga Estriol powder (CAS 50-27-1) kubva kuAASraw